A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia 450.57, mara mgbanwe ya | Site na Linux
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia 450.57, mara mgbanwe ya
Mgbe ọtụtụ izu nke mmepe na ịrụsi ọrụ ike Ndị mmepe Nvidia wepụtara mwepụta nke mbụ anụ version na na mgbakwunye na nke nwekwara a ọhụrụ alaka ya Nvidia 450.57 ọkwọ ụgbọala.
N'ime mgbanwe ndị kachasị ewu ewu na ụdị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ a, anyị nwere ike ịchọta iduzi Vulkan nkwado maka DisplayPort ejikọrọ na DP-MST, nkwado maka ụlọ akwụkwọ NVIDIA NGX ọhụrụ na Linux, nkwalite PRIME, 10/12 bit HEVC nyopụta nkwado maka VDPAU naanị na ndị ọzọ
1 Main ọhụrụ atụmatụ nke Nvidia 450
2 Esi tinye Nvdia ọkwọ ụgbọala na Linux?
Main ọhụrụ atụmatụ nke Nvidia 450
Na nke ọhụrụ a nke ndị ọkwọ ụgbọ ala, dịka e kwuru na mbido, otu n'ime mgbanwe ndị pụtara na ndị ọzọ bụ na ugbu a Vulkan API na-akwado onyonyo iduzi na ngosipụta ejikọrọ site na DisplayPort Multi-Stream Transport (DP-MST).
Mgbanwe ọzọ dị mkpa na ụdị ọhụrụ nke Nvidia 450 bụ gbakwunyere nkwado maka Mmekọrịta PRIME iji nyefee GPU ọzọ na sistemụ site na iji ọkwọ ụgbọala x86-video-amdgpu.
Ngosipụta ejikọrọ na NVIDIA GPU nwere ike iji rụọ ọrụ nke "Reverse PRIME" iji gosipụta nsonaazụ nke GPU ọzọ na sistemụ ọtụtụ GPU.
Ọzọkwa ugbu a VDPAU na-agbakwunye nkwado maka ebupụta vidiyo 16-bit na ikike iji gbalite mmeghe nke 10/12 bit HEVC iyi.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na-kwuru na ọkwa nke ọhụrụ a version:
Agbakwunyere nkwado maka ndọtị OpenGL glNamedBufferPageCommitmentARB.
Agbakwunyere ọba akwụkwọ libnvidia-ngx.so site na ntinye nke nkwado maka teknụzụ NVIDIA NGX.
Nkọwapụtawanye nke ngwaọrụ ndị akwadoro Vulkan na sistemụ yana sava X.Org.
Ewepụla ọbá akwụkwọ libnvidia-fatbinaryloader.so, ndị ọrụ ya kesara n'ọbá akwụkwọ ndị ọzọ.
Maka ngwa OpenGL na Vulkan, agbakwunyela maka Advanced Image Sharpening mode.
Wepu nhọrọ iji hazie ihe nkesa X-IgnoreDisplayDevices.
Esi tinye Nvdia ọkwọ ụgbọala na Linux?
Rịba ama: tupu ịmee usoro ọ bụla, ọ dị mkpa ka ị nyochaa ndakọrịta nke ọkwọ ụgbọala ọhụrụ a na nhazi nke kọmputa gị (usoro, kernel, Linux-headers, Xorg version).
Maka na ọ bụrụ na ọ bụghị, ịnwere ike ijedebe na ihuenyo ojii ma ọ dịghị oge anyị ga-ahụ maka ya ebe ọ bụ mkpebi gị ịme ya ma ọ bụ.
Maka ndị nwere mmasị ịnwụnye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia na sistemụ ha, ihe mbụ ha ga-eme bụ bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Nvidia na na ya download ngalaba ha ga-enwe ike ịchọta ụdị ọhụụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala dị njikere maka nbudata.
Ozugbo ebudatara nbudata ahụ, ọ dị mkpa ka anyị cheta ebe ebudatara faịlụ ahụ, ebe anyị ga-akwụsị nnọkọ onye ọrụ eserese iji wụnye ọkwọ ụgbọ ala na sistemụ ahụ.
Iji kwụsị eserese eserese nke sistemụ, maka nke a, anyị ga-pịnye otu n'ime iwu ndị a dabere na njikwa na anyị na-eji ma na anyị ga-eme ndị na-eso Nchikota igodo, Ctrl Alt F1-F4.
N'ebe a, ha ga-ajụ anyị maka nzere nbanye usoro anyị, anyị abanye ma gbaa ọsọ:
sudo ọrụ lightdm nkwụsị
sudo /etc/init.d/lightdm nkwụsị
sudo service gdm kwusi
sudo /etc/init.d/gdm kwụsị
sudo service mdm kwusi
udo /etc/init.d/kdm kwụsị
sudo service kdm kwusi
sudo /etc/init.d/mdm kwụsị
Ugbu a anyị ga-edo onwe anyị na nchekwa ebe ebudatara faịlụ ahụ na Anyị na-enye ikikere igbu na:
Y n'ikpeazụ anyị ga-agba ọsọ ahụ:
Ná ngwụsị nke nwụnye anyi aghaghi imeghachi ya na:
sudo service lightdm bido
sudo /etc/init.d/lightdm bido
sudo service gdm bido
sudo /etc/init.d/gdm bido
sudo service mdm bido
sudo /etc/init.d/kdm bido
sudo service kdm bido
sudo /etc/init.d/mdm bido
Nwekwara ike ịhọrọ ịmalitegharị kọmputa ahụ ka mgbanwe ọhụrụ na ọkwọ ụgbọala buru ibu ma gbuo ya na mmalite usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia 450.57, mara mgbanwe ya
Agbalịrịla m onye ọkwọ ụgbọala ọhụrụ a maka kaadị GT-710, na Linux mint 18, kernel 4.15, isi ubuntu 16.04 lts, ​​cinnamon desktop, amaara m na OS m adịghị ugbu a, na mbụ m nwara ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ na ndị ochie mana na mberede na ihuenyo tụfuru njikọ na-egosi "ọ dịghị mgbaàmà" ozi, M na-agbalị ọhụrụ a ọkwọ ụgbọala na olileanya na ọ ga-edozi na otu omume na-adịgide, ọ bụ ezie na m na-achọpụta na ọ na-ewe ogologo oge ime na nsụgharị na vidiyo na ihe oyiyi nke nchọgharị ka mma. Ikekwe imelite OS m na nke ọhụrụ nke na-eji kernel 5 na gnome emeziwanye arụmọrụ na njehie ndị a anaghị eme.
Maka ihe ọ baara gị, etinye m Linux Mint 20 ozugbo na igbe ahụ ọ dị mma. N'oge ahụ enyeghị m nsogbu ọ bụla, m na 1060G Nvidia 3. Enweghị m onye ọkwọ ụgbọ ala a, enwere m 440 nke bụ nke na-abata na nchekwa ma ana m ala azụ itinye nke ọhụrụ, ọ dị mma, mana ka ọ na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu amaghị m ma m ga-etinye ya n'ihe egwu.
Linus Torvalds nakweere nkwenye maka ụdị koodu ahụ yana okwu ndị gụnyere ya
Linus Torvalds kwuru banyere ọrụ, nsogbu ugbu a na ọdịnihu na Kernel